Orinasa sy mpanamboatra Jacket's Real Down Jacket | Suxing
Palitao ambany vehivavy
Palitao tena ambany zazavavy
Palitao gisa milatsaka ho an'ny lehilahy
Palitao Faux Down an'ny zazalahy
Palitao tena ambany lehilahy
Palitao tena izy nidina tamin'ny lamba maivana nylon 100%, famenoana 90/10, ny akanjo milay indrindra ho anao, manome hafanana tsy voafehy. Ataovy mafana foana ary miaraka amin'ny famoahana rano avo. Azo sorohina tsy ho lena mando amin'ny orana na oram-panala.
Safidy A. Safidy B
Mameno: sandoka Mameno: 90/10 tena ambany
Lamba: 100% nylon Lamba: nylon 100%
Item: Palitao tena izy 20FAS40
Firafitry ny lamba: 100% nylon
mameno: 90% nidina 10% volom-borona
Milanja ambany: 80G
toetra: Maivana nefa mafana；Tsy tantera-drano
Test: Fitsapana ara-batana sy simika OK
MOQ: 300-500 / 501-1000 / mihoatra ny 1000
Fandefasana: Amin'ny ranomasina, amin'ny rivotra, amin'ny alàlan'ny mpandefa iraka, amin'ny lamasinina
FANDEFAM-PANDAMARANA L / C, D / P, T / T, Hifampiraharahana
Sokajy loko loko
SIZE CHINESE M L XL XXL XXXL
FAHALALAHANA 44 46 48 50 52
FARITANY BOTOTOMA 105 110 115 120 126
HALAVAN'NY TÀNAN'AKANJO 64 65 66 67 68
Ahoana ny fomba hisafidianana?
Tsotra sy madio mba hamoronana fomba tsy milamina, manjaitra telo refy, manify, toa mahay kokoa
Mitondrà hafanana ampy amin'ny ririnina. Ny famolavolana kitapo slotted dia mety sy azo ampiharina. Ny lamba dia milamina sy malefaka, marefo ary akaiky ny hoditra. Avelao ny fihetsika sy ny mari-pana hiara-miaina, ny rivotra tsotra sy ny fomban'ny arabe izay mitambatra tena tsara, maneho ny lamaody feno hatsarana sy henjana.
Lamba voadio ambony kalitao, manana permeability rivotra sy permeability hamandoana tena tsara, tahony malefaka, tsy misy deformation aorian'ny fanasana. Ny famolavolana mahazatra sy lava dia afaka manova ny tarehimarika, ary manify sy lamaody amin'ny ankapobeny.
Akanjo vita amin'ny landy sy lava vita amin'ny landy an'ny lehilahy, akanjo landihazo satroka lava sy matevina, fampisehoana mitazona rivotra sy mafana no tena tsara, tsotra sy milamina, tena lamaody, manidina sy manintona paosy, mety kokoa ho an'ny zazakely mitazona zavatra, feno fomba fialamboly!
Amin'ny ririnina, ilay akanjo matevina vaovao matevina, miaraka amin'ny endrika Hoodie mahazatra sy marobe, dia mampiseho ny fomba lamaody feno, ary ny vatany ambony misy lamaody sy mahavariana dia mampiseho ny hakanton'ny lehilahy lamaody rehetra.
360 Degree Rotary Head Automated Template Machine
Masinina fanaraha-maso lamba
Previous: Akanjo fatotra-dye
Manaraka: Palitao Faux Down an'ny zazalahy
Palitao Men Down
Mamoaka palitao nidina ho an'ny lehilahy
Mamoaka palitao vita amin'ny akanjon'ny lehilahy
Palitao nidina avy amin'ny rivotra